mingalathukha's blog | Mingalathukha Vihara, Myanmar Burmese Monastery in Perth
လစဉ် မြန်မာအစားအစာ စုပေါင်းဈေးရောင်းပွဲ - 30 July 2017
Created by mingalathukha on Sat, 07/22/2017 - 22:58
Mingalarbar! You are cordially invited to participate in the Burmese Food Fair servingavariety of delicious Burmese and Asian food which will be held at Minglala Thukha Vihara, 76 Templeton Crescent, Girrawheen, on 30th July 2017 commencing from9am till 1 pm. Thank you for your continued support! Please bring your family and friends, and enjoy your day.
Read more about လစဉ် မြန်မာအစားအစာ စုပေါင်းဈေးရောင်းပွဲ - 30 July 2017
မင်္ဂလသုခဝိဟာရ လစဉ်မြန်မာအစားအစာ စုပေါင်းဈေးရောင်းပွဲ
Created by mingalathukha on Fri, 06/23/2017 - 09:53
နံနက် ၉း၀၀ နာရီမှ နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီ
76 Templeton Crescent Girrawheen WA
ကြွရောက် ကုသိုလ်ယူ အားပေးကြပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Location: 76 Templeton Crescent Girrawheen WA
Read more about မင်္ဂလသုခဝိဟာရ လစဉ်မြန်မာအစားအစာ စုပေါင်းဈေးရောင်းပွဲ
Created by mingalathukha on Wed, 10/12/2016 - 23:43
အနောက်သြစတြေးလျားနိုင်ငံ ပါ့သ်မြို့နှင့် အနီးဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသား ညီအကို မောင်နှမများ၊ ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟများအား အထူးဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ကပ်လှူပွဲတော်ကို ဦးဝင်းစိုး+ဒေါ်ခင်ရွှေတို့ကို အမှူးထား၍ သား၊သမီး မောင်နှမတစ်စုတို့မှ မတည်လျက် သံဃာတော်များအား ဆွမ်းဆက်ကပ်ခြင်း၊ လှူဖွယ်ဝတ္ထုများ လှူဒါန်းခြင်း၊ မင်္ဂလသုခကျောင်း ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမများကလည်း
ကြွရောက်လာကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများအား မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာများနှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးမည်ဖြစ်ပါ၍ အားပေးသုံးဆောင်ကာ အတူတကွ ကုသိုလ်ပါဝင်ကြပါရန် ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Read more about နဝမအကြိမ်မြောက်စုပေါင်းကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ
မိုးကုတ် အဖွဲ့ချုပ် နာယက နိဗ္ဗာန်ရွှေဂူ ဆရာတော် ဦးသောဘဏ ၏ တရားပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
Created by mingalathukha on Thu, 12/31/2015 - 14:59
တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ …
ဆရာတော် ဦးသောဘဏမှ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားတော်များ
ဟောကြားချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါ၍ ကြွရောက်ကာ တရားတော်နာယူကြပါရန်
နေ့ရက် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက် ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် (သောကြာ)
ဇန်န၀ါရီလ ၂ ရက် ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် (စနေ)
ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက် ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် (တနင်္ဂနွေ)
Read more about မိုးကုတ် အဖွဲ့ချုပ် နာယက နိဗ္ဗာန်ရွှေဂူ ဆရာတော် ဦးသောဘဏ ၏ တရားပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
စုပေါင်းကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူ ပွဲ (8 Nov 2015)
Created by mingalathukha on Fri, 10/23/2015 - 10:29
မင်္ဂလသုခကျောင်း၌ စုပေါင်းကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲတော်ကို အဖွားဒေါ်စိန်ညွှန့် နှင့်ဒေါ်ကြင်ဝမ်တို့မှ မတည်၍ သံဃာတော်များအား ဆွမ်းဆက်ကပ်ခြင်း၊ လှူဖွယ်ဝတ္ထုများ လှူဒါန်းခြင်း၊ မင်္ဂလသုခကျောင်း ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမများကလည်း
ကြွရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များအား မြန်မာ့ရိုးရာထမင်းဟင်း စုံလင်စွာဖြင့်ကျွေးမွေး၍ အအေး၊ ဖျော်ရည်၊ မြန်မာမုန့်မျိုးစုံ တို့ဖြင့်လည်း ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမည်။
သို့ပါ၍ မြန်မာတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမ များအား ကုသိုလ်ယူ ပါဝင်နိုင်ကြပါရန် အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Read more about စုပေါင်းကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူ ပွဲ (8 Nov 2015)
အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ (12 July 2015)
Created by mingalathukha on Mon, 06/08/2015 - 21:50
အနောက်သြစတြေးလျားနိုင်ငံ ပါ့သ်မြို့နှင့် အနီးဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသား ညီအကို မောင်နှမများ၊ ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟများအား အထူးဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲသို့ ကြွရောက်လာသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများအား အလှူရှင်များက မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာများနှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးမည်ဖြစ်ပါ၍ အားပေးသုံးဆောင်ကာ အတူတကွ ကုသိုလ်ပါဝင်ကြပါရန် ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Read more about အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ (12 July 2015)
ဝါးချက် ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီး၏ ထာဝရငွေပင် စုပေါင်းဈေးရောင်းပွဲ (14 June 2015)
Created by mingalathukha on Mon, 06/08/2015 - 21:48
ကမ္ဘာ့သာသနာပြု စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ကျစွာချောင် ဝါးချက်ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဦးလက္ခဏအား ဦးထိပ်ထား ရည်စူးလျက် ဒုတိယအကြိမ် စုပေါင်းဈေးရောင်းပွဲ
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ကျစွာချောင် ဝါးချက် ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီး၏ ထာဝရငွေပင် ဆက်လက်ရှင်သန်စေရေးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါအစီအစဉ်ဖြင့် စုပေါင်းဈေးရောင်းပွဲ ကျင်းပပါမည်။
Read more about ဝါးချက် ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီး၏ ထာဝရငွေပင် စုပေါင်းဈေးရောင်းပွဲ (14 June 2015)
ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ၏ တရားပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ (17/10/2014)
Created by mingalathukha on Tue, 10/14/2014 - 09:44
တိုင်းရင်းသား ညီအကို မောင်နှမများ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ... ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) က နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားတော်များ ဟောကြားချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါ၍ သတ်မှတ်ထားသည့် နေ့ရက် နှင့် အချိန်အခါများတွင် ကြွရောက်ကာ တရားတော်နာယူကြပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် ။ ။ အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် (သောကြာနေ့)
အချိန် ။ ။ ည ၇း၀၀ နာရီတွင်စတင်ပါမည်။
နေရာ ။ ။ မင်္ဂလသုခ၀ိဟာရ
အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီတွင် ကထိန်သက္ကန်းကပ်လှူ အပြီး ဆရာတော် ဦသုမင်္ဂလ မှ ကထိန်တရားတော် ဟောကြားချီးမြှင့်ပါမည်။
Read more about ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ၏ တရားပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ (17/10/2014)
Ka Htein Robes Offering Ceremony 19.10.2014
Created by mingalathukha on Mon, 10/13/2014 - 00:52
You are cordially invited to participate in the "Ka Htein Robes Offering Ceremony" which marks the end of the three-month Buddhist Lent.
This will be celebrated in our Mingala Thukha Vihara as follows:
Read more about Ka Htein Robes Offering Ceremony 19.10.2014
သတ္တမအကြိမ်မြောက် စုပေါင်း ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ
Created by mingalathukha on Mon, 06/30/2014 - 14:42
အနောက်သြစတြေးလျားနိုင်ငံ ပါသ့်မြို့နှင့် အနီးဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသား ညီအကို မောင်နှမများ၊ ဆွေမျိုး မိသင်္ဂဟများကို အထူးဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲသို့ ကြွရောက်လာကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများအား အလှူရှင်များက မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာများနှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးမည်ဖြစ်ပါ၍ အတူတကွကုသိုလ်ပါဝင်ကြပါရန် ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ (၆) ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)
နံနက် (၈း၀၀) မှ စတင်ပါမည်
တရားနာ၊ ရေစက်ချ၊ အမျှပေးဝေချိန်
နေ့လည် ၁၂း၃၀ နာရီ
Read more about သတ္တမအကြိမ်မြောက် စုပေါင်း ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ